Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Auction Divay Barolo: €600,000 ho an'ny Barolo ao anaty barika
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • culinary • Kolontsaina • Editorial • Vaovao Mafana Alemana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • Vaovao Mafana Soisa • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao • Divay & Fanahy
Auction divay Barolo
Indraindray ny hetsika dia hetsika iray fotsiny, ary indraindray (rehefa tsara vintana aho) dia mivadika ho traikefa amin'ny asabotsy tolakandro mahafinaritra ny hetsika izay tsara amin'ny fanaovana ny tsara.
Vao haingana aho no nasaina tao amin'ny Barolo en primeur tao Il Gattopardo (miaraka amin'ny Zoom simulcast avy amin'ny Grinzane Cavor Castle any Piedmont, Italia). Nojerena ihany koa ny hetsika tany Alemaina, Soisa, ary UK, niaraka tamin'ny Birao Mpizahatany Langhe Monferrato Roero. En Primeur dia rafitra fividianana malaza any Bordeaux izay amidy ny divay ary novidina raha mbola antitra ao anaty barika izy ireo ary aterina amin'ny mpividy amin'ny fiafaran'ny dingana (tsy nalaza tany ivelan'ny Gironde ity fomba fivarotana ity).
Ny hetsika dia nanome fahafahana tsy mbola nisy toy izany ho an'ny mpanangona divay handray anjara amin'ny fandraisana anjara amin'ny filantropa izay hahasoa ny mpanao asa soa sy ny mpanangona divay. Ireo mpanafatra ambony indrindra amin'ny barika de Barolo (2020 vintage) avy amina parcel manokana ao anatin'ny tanimboaloboka manan-tantara no nahazo ny divay sy ny zo hireharehana.
Ny tanjona iray hafa dia ny hanasongadinana ny fahasarotan'ny singa isan-karazany mandrafitra ny tanimboaloboka Gustava manan-tantara (hatramin'izao fotoana izao dia tsy mbola voatazona ho varieta tsy miankina ny divay). Nahazo barika divay vita tamin'ny voaloboka Barolo Nebbiolo, nojinjaina tamin'ny taona 2020, tao amin'ny cascina Gustava Vineyard, Frinzane, ireo mpanafatra ambony indrindra. Rehefa tapitra ny dingan'ny fahanterana (2024) ny divay dia hamokatra tavoahangy manodidina ny 300 eo ho eo ny barika tsirairay, izay hatao anaty tavoahangy ary asiana marika manokana noforonin'ilay mpanakanto Giuseppe Penone. Ny tsena kendrena amin'ny lavanty? Ireo mpankafy divay avo lenta, anisan'izany ny mpanangona divay, mpividy ary mpivarotra.
Barolo. Ny divay
Nebbiolo dia nitombo tany Piedmont tamin'ny taonjato faha-14. Tara ny voaloboka ary mora simba noho ny andro ratsy; nefa, satria izy no manao divay mena manitra sy mafonja, dia tena hajaina izy io. Ny Barolos dia tokony ho telo taona farafahakeliny, fara fahakeliny, roa amin'ny hazo, mamokatra divay mena sy matanjaka ary matetika mila dimy taona farafahakeliny mba hanalefahana azy ho divay be tany.
Barolo dia heverina ho iray amin'ireo anarana divay tsara indrindra any Italia ary manam-pahaizana maro no mihevitra azy io ho ny tsara indrindra amin'ny famokarana divay italiana. Ny oeniphile sasany dia miantso an'i Barolo ho Mpanjakan'ny Divay sy Divain'ny Mpanjaka, hatramin'ny tapaky ny taonjato faha-19, Piedmont dia an'ny Tranon'i Savoy, mpitondra manan-tantara any avaratrandrefan'i Italia. Ny Savoy dia nankasitraka an'i Nebbiolo ary ny Barolo DOCG dia ahitana kaominina 11, anisan'izany ny tanànan'i Barolo.
Misy tanim-boaloboka 4200 hektara ao amin'ny fiantsoana ary nanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19, ny mpamboly dia niezaka ny hamantatra ny tanimboalobony tsara indrindra. Ny Barolo COCG dia mitaky ny divay ho 100 isan-jato Nebbiolo, voaloboka heverina ho Pinot Noir any Italia.
Mahaliana ny manamarika fa i Grinzane dia tsy manana rakitsoratra momba ny famokarana Barolos tanim-boaloboka tokana ary ny ankamaroan'ny voankazo dia nampiasaina tamin'ny Barolos mifangaro. Hitan'ny manam-pahaizana fa i Nebbiolo dia manana fahafahana mampita ny maha-zava-dehibe ny toerana ary manana fahafahana tena tsara hijoro irery. Ny divay rehetra tao amin'ny lavanty dia nodiovina tao anaty barika, nandany 10-15 andro teo amin'ny siny hoditra miaraka amin'ny paompy manual sy ny fanerena. Ny fermentation malolactic dia natao tao anaty barika. Tombanana ho 24 volana eo ho eo amin'ny hazo ny fahanterana ary hiovaova arakaraka ny divay tsirairay.
Antonio Galloni (mpitsikera divay sy Tale Jeneralin'ny Vineous) no nandamina ny fandaharana tao New York ary namorona NFTs (famantarana tsy azo ampiasaina) ho an'ny tsirairay amin'ireo barrique 15, endrika taratasy fanamarinana nomerika azo antoka amin'ny blockchain. Teraka tany Venezoelà, i Galloni dia nampidirina tamin'ny divay tamin'ny fahazazany satria ny ray aman-dreniny dia mpivarotra divay italianina ary ny raibeny dia tia divay avy any Bordeaux, Bourgogne ary Rhone. Nanoratra ny tantarany voalohany tamin'ny Bourgogne sy Bordeaux i Galloni ho an'ny kilasy frantsay any amin'ny lisea.
Galloni dia nahazo MBA avy amin'ny MIT Sloan School of Management. Tamin'ny taona 2003 dia nanomboka gazety iray nifantoka tamin'ny divain'i Piedmont izy, ka namokatra ny androm-piainany manontolo tamin'ny divay italiana. Tena nampiaiky azy i Barolo ka nanomboka ny Piedont Report (2004), ary lasa mpitari-dalana voalohany ho an'ny divay ao amin'ny faritra. Galloni dia lasa mpitsikera divay italiana ho an'i Robert Parker tamin'ny 2006 ary tamin'ny 2013 dia nanomboka Vinous.
Tany Italia, ilay mpanao asa soa, Evelina Christillin, filohan'ny Museum of Egyptian Antiquities Foundation (Turin), ary filoha teo aloha ENIT (The Italian Government Tourist Board) no nampiantrano ny hetsika. Niaraka taminy ny mpanolotra lavanty, Valeria Ciardiello, mpanao gazety italiana ary Cristiano De Lorenzo, talen'ny Christie's Italia, izay nitantana ny lavanty mivantana.
Ny lavanty dia notarihin'ny trano lavanty Christie, any Italia…tamin'ny dingana tsy mahazatra, tsy nanaiky ny vaomiera mahazatra izy ireo mba hahazoana tombony amin'ny asa soa.
Nahazo tolo-bidy 30,000 Euros ny barrique tsirairay, namokatra tavoahangy Barolo 300 eo ho eo miaraka amin'ny marika namboarin'ilay mpanakanto italiana sady mpanao sary sokitra malaza, Giuseppe Penone, fantatra amin'ny sarin-kazo midadasika izay mahafantatra ny fifandraisan'ny olombelona sy ny tontolo voajanahary.
Ny famokarana divay ho an'ny hetsika dia nanara-maso ny laboratoara ENOSIS Maraviglia an'i Donato Lanti.
Ny komity mpitantana siantifika dia notarihin'i Matteo Ascheri, filohan'ny Consortium ho fiarovana an'i Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'i Vincenzo Gerbi, Profesora Emeritus ao amin'ny Oniversiten'i Turin ary Vladimiro Rambaldi, Talen'ny Agenzia di Pollenzo, Sp. A, ary ny fiaraha-miasan'ny mpikaroka Anna Schneider (National Research Council- Institute for the Sustainable Protection of Plants).
Mpandresy tamin'ny Barolo Barriques
Mpividy Amerikana iray ihany no nahomby; ny ankamaroan'ny barika dia novidin'ny mpanangona tany Eoropa. Amin'ny fitambarany, nahangona 600,000 Euros mahery ny lavanty miaraka amin'ny lot tsirairay mitentina 30,000 hatramin'ny 50,000 Euros avy.
Ny tolo-bidy ambony indrindra amin'ny 140,000 Euros dia nahazo ny hany tonneau tao amin'ny fandaharana, barrique divay lehibe mitovy amin'ny tavoahangy 600 eo ho eo amin'ny Barolo de Commune di Grinzane Cavour 2020 izay nampiana tsy nampoizina tamin'ny faran'ny lavanty nataon'ny filoha lefitry ny Cassa di Risparmio ao amin'ny Cuneo Foundation, Ezio Raviola.
Ny tolo-bidy 50,000 Euro tao amin'ny barika Barolo No. 10 dia nahasoa ny Fondation Adas (tsy mitady tombony izay manome fitsaboana fanaintainana, fanohanana ara-tsaina ary fikarakarana fanafoanana ao an-trano). Araka ny filazan'i Galloni mpitsikera, dia "iray amin'ireo divay mahaliana indrindra amin'ity lavanty ity..."
Ireo mpandray tombony amin'ny lavanty ihany koa dia nampidirin'ny Alta Langa Cultural Park ho an'ny fandaharan'asa ara-kolontsaina/fizahan-tany; ny Augusto Rancilio Foundation ho an'ny fandalinana/fikarohana momba ny maritrano, manohana ny tanora sy ny fidiran'izy ireo amin'ny tontolon'ny asa ary ny famerenana amin'ny laoniny ny villa tamin'ny taonjato faha-17, ary koa ny fiantrana any Hong Kong izay manohana ny kamboty sy ny zatovo bevohoka.
Manoro hevitra ireo mpikarakara hetsika fa ny Barolo En Primeur voalohany (fantatra amin'ny anarana hoe “edition zero”) dia ho lasa lasitra ho an'ny ho avy, ary angamba, ireo mpamokatra Barolo hafa dia hanome ny divay ho an'ny hetsika hafa mitovy amin'izany.
mario masciullo hoy:
Desambra 5, 2021 amin'ny 12:16
Salama Juergen, mendrika haparitaka any Italia ity lahatsoratra tena mahaliana ity.
Afaka mahazo alalana amin'ny Dr E.Garely ve aho handroso?
Misaotra anao. Mario